Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Aarsaa Kakuu tak met New Covenant Ministries
Jalqaba Jecha mana jedhu duree zo yoo materie als irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan over ISAAA is jijjirama.
Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun nationale ka'amu yookin goby in kolom in kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa je immoo Itti gaafatummaa meer abbummaan Waaqayyo o Akka ben ik waliin hubbana. Maaliif Jenne Soja yoo gaafannee onthuld qulqulluudha jedhe ofi isaaf dhugaa ba'e Waaqayyo deur waan ta'eef. Ja Ta'u denk Waaqayyo Akka isaatti qulqulluu Akka dit yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka jaar qulqulluu ta'e isinis qulqulloota Ta'a jedhe Kan niet abboomeef.
Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka Tanee sagaleen Waaqayyo niet hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo met de vader van jaallata; nuyis (Water, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas zelf Bira ni Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee hel rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata hel, iddoo jireenya over ISAAA is godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma huid hel Bakka qulqulluu plaats. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati. "
Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin Bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi'a, Vraag Waaqayyo keessan nan Hard isin Saba dit alleen genoegen (2Qor.6:16). Nu richting mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, niet hafuurri Waaqayyo keessa boqatu en qulqulluummaati ni kijken Kinderen?
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, ISIN akka akka feedha hafuuraatti malee Fedha foonitti uit jiratan; namni hafuura Kristos van keessaa prijs qabne nationale Kristos miti (Rome 8:9). Garu isin dit Akka niet qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; niet qulqulluummaa hafuura ISA's Mission taatanii, meeste nationale OFII keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa Waaqayyo Ta'u hel niet qulqullummaa Barree qulqulluummati akka eegnu, Kan binnen nuuf kennee hond Maan wolf isaaf sleutel fijne geit qulqulluun nu haa Screaming.
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Reacties
Addisuu Baqqalaa op juli 18, 2015 om 10:15 de schreef:
deriba fufa op mei 10, 2015 om 6:44 de schreef:
deriba fufa op mei 10, 2015 om 6:38 de schreef:
Bultuma Itana op maart 12, 2015 om 5:39 de schreef: